Ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya nke Africa na-amata Costa Rica dị ka onye ndu na-apụta na njem nlegharị anya ụwa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya nke Africa na-amata Costa Rica dị ka onye ndu na-apụta na njem nlegharị anya ụwa
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • nzukọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Akụkọ gbasara Seychelles • Sustainability News • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • WTN
Alain St.Ange, onye isi oche Board Tourism
dere Alain St.Ange
Ebe mba 52 dị n'Afrịka dị ka ndị otu World Tourism Organisation, kọntinenti ahụ bụ mpaghara kacha mkpa maka UNWTO ma a bịa na ntuli aka.
Onye isi ala Alain St. Ange chọrọ ka Africa guzoro na votu na UNWTO General Assembly na-abịa na Spain mgbe Costa Rica buru ụzọ nwee obi ike guzosie ike maka nghọta na izi ezi.
"Ọ bụ ụbọchị dị mma maka UNWTO maka ndị njem nlegharị anya Africa na njem nlegharị anya ụwa"
Onye isi oche Board Tourism Board bụ Alain St. Ange ruru Hon. Minista njem nlegharị anya maka Costa Rica, Hon. Minista Gustav Segura Costa Sancho ma kelee ya maka ọhụụ ya na ntinye aka na ịrịọ vootu nzuzo na nkwenye nkwenye UNWTO na-abịanụ maka nhọpụta odeakwụkwọ ukwu.
Alain St. Ange, onye bụbu onye minista na-ahụ maka njem nlegharị anya nke Seychelles nwere ahụmịhe nke ya na usoro ntuli aka UNWTO wee sị.
"Ekele m onye Minista njem nlegharị anya Costa Rica maka ya ngagharị iwe ịkpọ maka ntuli aka nzuzo maka usoro nkwenye na Nzukọ Mgbakọ na-abịanụ na Madrid. "
Nke a bụ ezigbo mmepe na ana m eto Costa Rica maka nrịgo elu. Ọ ga-emesi iguzosi ike n'ezi ihe na ntuli aka na-abịanụ ma ọ bụrụ na ọ mepee ntuli aka ọzọ ọ ga-emesi usoro ziri ezi na asọmpi maka ọkwa a dị mkpa na njem nlegharị anya ụwa.
M ga-asị na ọ bụ ụbọchị dị mma maka UNWTO maka ATB na maka njem nlegharị anya ụwa."
Njem nlegharị anya bụ nnukwu ụlọ ọrụ dị oke mkpa maka Community of Nations na òtù UN anyị ga-ahụrịrị ka ọ na-agbaso ụkpụrụ a tụrụ anya n'ịhọrọ onye isi ya.
Arịrịọ m na-arịọ bụ ka Africa na-ekere òkè dị mkpa na ntuli aka na-abịanụ yana ka mba dị iche iche sonye na ịtụ vootu.
Anyị nwere ndị otu UNWTO 52, nke bụ pasentị kachasị na kọntinent ọ bụla.
Nke a bụ ndepụta mba ndị otu Africa:
Federal Republic nke Somalia
Njikọ nke Comoros
United Republic nke Tanzania
More banyere ndị njem njem nlegharị anya nke Africa: www.africantourismboard.com
Mmetụta akụ na ụba nke COVID-19 na Africa: ATB Webinar
Alain St Ange anọwo na -arụ ọrụ na njem nlegharị anya kemgbe 2009. Onye isi ala na onye minista na -ahụ maka njem bụ James Michel họpụtara ya ka ọ bụrụ Director nke Ahịa maka Seychelles.
Onye isi ala na minista na -ahụ maka njem nlegharị anya bụ James Michel họpụtara ya ka ọ bụrụ onye isi ahịa nke Seychelles. Mgbe otu afọ gachara
Mgbe otu afọ nke ije ozi gasịrị, a kwalitere ya n'ọkwa onye isi oche nke Seychelles Tourism Board.
Na 2012 e hiwere ọgbakọ mpaghara mpaghara agwaetiti Vanilla Islands wee họpụta St Ange ka ọ bụrụ onye isi oche mbụ nke nzukọ a.
N'ime imezigharị ụlọ omebe iwu nke 2012, a họpụtara St Ange ka ọ bụrụ Minista njem na ọdịbendị nke ọ gbara arụkwaghịm na 28 Disemba 2016 ka ọ nwee ike gbaa akwụkwọ dị ka odeakwụkwọ ukwu nke World Tourism Organisation.
Na Mgbakọ UNWTO dị na Chengdu na China, onye a na -achọ maka "Circuit Speakers" maka njem na nkwalite mmepe bụ Alain St.Ange.
St.Ange bụ onye bụbu Minista na-ahụ maka njem nleta, njem ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ mmiri na mmiri, bụ onye hapụrụ ọfịs na Disemba afọ gara aga maka ọkwa odeakwụkwọ ukwu nke UNWTO. Mgbe obodo ya weghaara akwụkwọ ikike ya ma ọ bụ akwụkwọ nkwado ya otu ụbọchị tupu ntuli aka na Madrid, Alain St.Ange gosipụtara ịdị ukwuu ya dị ka ọkà okwu mgbe ọ na-agwa nzukọ UNWTO ihu na amara, oke na ụdị.
Edere okwu na -akpali akpali ya dị ka okwu kacha mma akara na ngalaba mba ụwa UN a.
Mba ndị Afrịka na -echetakarị okwu Uganda ya maka Platform Tourism East Africa mgbe ọ bụ ọbịa ọbịa.
Dị ka onye minista njem nlegharị anya, St.Ange bụ onye na -ekwukarị okwu na onye a ma ama, a na -ahụkarị ya ka ọ na -ekwu okwu na nnọkọ na nnọkọ na nnọchite obodo ya. A na -ahụ ike ya ikwu okwu 'apụ apụ' dị ka ikike na -adịghị ahụkebe. Ọ na -ekwukarị na ya na -ekwu okwu site n'obi.
Na Seychelles a na -echeta ya maka akara akara na mmeghe gọọmentị nke agwaetiti Carnaval International de Victoria mgbe o kwughachiri okwu John Lennon ama ama… ”ị nwere ike ịsị na abụ m onye nrọ, mana ọ bụghị naanị m. Otu ụbọchị unu niile ga -esonyere anyị, ụwa ga -adịkwa mma dịka otu ”. Ndị nta akụkọ ụwa gbakọtara na Seychelles n'ụbọchị ahụ jiri okwu nke St.Ange kwuru nke mere akụkọ n'isi ebe niile.
St.Ange kwupụtara isi okwu maka "Njem Nleta & Azụmaahịa na Canada"
Seychelles bụ ezigbo ihe atụ maka njem nlegharị anya na -adigide. Nke a abụghị ihe ijuanya ịhụ ka a na -achọ Alain St.Ange ka ọ bụrụ ọkà okwu na sekit mba ụwa.
Onye nke Njem azụmahịa.